Thursday August 09, 2018 - 17:55:18 in Wararka by saleban Cilmi
Wararkii U Dambeeyay Ee Xaaladda Cabdi Iiley Iyo Jig-Jiga & Dawladda Djibouti Oo Sheegtay In Nolosha Lagu Gubay 5 Ruux Oo Muwaadinteeda Ah Oo Diri-Dhaba Ku Sugnaa Wararkii U Dambeeyay Ee Xaaladda Cabdi Iiley Iyo Jig-Jiga & Dawladda Djibouti Oo Sheegtay In Nolosha Lagu Gubay 5 Ruux Oo Muwaadinteeda Ah Oo Diri-Dhaba Ku SugnaaWararkii U Dambeeyay Ee Xaaladda Cabdi Iiley Iyo Jig-Jiga & Dawladda Djibouti Oo Sheegtay In Nolosha Lagu Gubay 5 Ruux Oo Muwaadinteeda Ah Oo Diri-Dhaba Ku Sugnaa
Dawladda Itoobiya ayaa la sheegay inay Madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar gaysay meel aan la garanayn, mana jiro wax war ah oo ku saabsan halka uu ku dambeeyay.
Taageerayaasha Cabdi Iiley ayaa baraha bulshada ku baahiyay inaan la garanayn meel uu ku dambeeyay Cabdi Iley islamarkaana madaarka Addis Ababa lagaga reebay xubnihii ka raacay Jigjiga. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu la wareegay taliyaha Booliska Itoobiya, markii uu Iiley gaadhay Addis Ababa.
Idaacadda BBC ayaa baahisay inay jiraan warar kala duwan oo ay qaarkood sheegayaan inuu xidhanyahay Mr. Iiley, halka ay warar kalena sheegayaan inuu ku jiro xabsi guri. BBC ayaa werisay in shalay laba diyaaradadood oo kuwa dagaalka ah lagu arkay magaalada Jigjiga.
Geesta kale, xaaladda magaalada Jigjiga ayaa inkastoo ay degentahay haddana waxa laga dareemayaa magaaladii oo cidlo noqotay. Weriye Itoobiyaan ah oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee AP, ayaa sheegay in magaaladu shalay ahayd cidlo, iyadoo ay dadka badankiisu ka baxeen magaalada, islamarkaana ay meheradaha iyo xarumaha dawladu xidhnaayeen. Shaqaalaha hay’adaha Qarmaada Midoobay ayaa iyaguna ku jiray guryahooda.
Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa saxafigan u sheegay in magaalada Diridhaba nolosha lagu gubay shan ruux oo reer Djibouti ah Isniintii.
Saxafigan ayaa sidoo kale sheegay in mid ka mid ah hay’adaha Qaramada Midoobay oo aanu magaceeda sheegin ay diyaarad gaar ah u dirtay shaqaalaheeda ku sugan magaalada Godey, laakiin iyadoo ay diyaaradu sidatay dhammaan waraaqihii sharci ee degitaanka, ayaa haddana waxa loo diiday inay madaarka Godey ka degto, waxaana markii ay gaadhay madaarka Godey lagu wargeliyay inaan loo ogolayn inay ka degto Godey kuna laabato Addis Ababa.